အဆိုပါ bookmobile | Holmbygden.se
အဆိုပါ bookmobile အားလုံးနိုင်ငံသားများမှရရှိနိုင်မယ့်လှိမ့အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်.
အဲဒီအကြောင်းရှိပါတယ် 3500 ဝတ္ထု၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအလှည့်အပေါ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ, အသက်အရွယ်အဘို့စုံထောက်ဇာတ်လမ်းများနှင့်စာအုပ်များ. အသံချေးဖို့စာအုပ်တွေနဲ့သင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်က MP3 format နဲ့စာအုပ်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာမီဒီယာ jukebox ရှိပါတယ်. သငျသညျ, ဘတ်စ်ကားသင်သည်ချေးချင်နေတဲ့စာအုပ်ကိုနိုင်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေ, အဘယ်သူမျှမတာဝန်ခံ, လာမယ့်အလှည့်ရန်နောက်ထပ်စာကြည့်တိုက်ကနေအမိန့်.
အဆိုပါ bookmobile မှန်မှန်တစ်လတစ်ကြိမ် Holmes သွားရောက်ကြည့်ရှု. နွေဦးကာလအတှငျး 2016 – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 27/1 24/2 30/3 27/4 25/5.
12.20-12.30 ယိုင်ခြင်း 126
12.40-14.10 Anundgård, ကျောင်းတွင်
အဆိုပါ bookmobile Holmsjönန်းကျင်ရရန်အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အများဆုံးကြိုဆိုကြသည်, နောက်တဖန်မှတ်တိုင်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များလိုအပ် 060-19 18 28 သို့မဟုတ် bokbussen@sundsvall.se. သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျမိုဘိုင်းစာကြည့်တိုက်များအတွက်နယူးအချိန်ဇယား, även här.
bookmobile န်ထမ်းသို့မဟုတ်ကလေးများ Call- ကြိုတင်ပေါ်နှင့်လူငယ်စာကြည့်တိုက် 060-19 18 28. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သူတို့သည်သင့်ချေးချင်ယူသေချာ. သင်တို့သည်လည်း e-mail, မှတဆင့်ကြိုတင်စာအုပ်တွေအမိန့်နိုင်ပါတယ်: bokbussen@sundsvall.se သငျသညျစာကြည့်တိုက်ကဒ်ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်, ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်, အရပျ၌, ဘတ်စ်ကားများတွင်
17/2 -16 Holmbygden.se: အဆိုပါ bookmobile “Mobibblan” – အဆိုပါလှိမ့်စာကြည့်တိုက်
24/10 -15 Sundsvall Tidning: မိုဘိုင်းစာကြည့်တိုက်အဟောင်း bookmobile အစားထိုး
29/10 -15 Youtube ကို: အသစ်ကမိုဘိုင်းစာကြည့်တိုက်များ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှို “Mobibblan”
4/10 -12 Holmbygden.se: အဆိုပါ bookmobile အရှုံးမပေးမည်မဟုတ်
စာကြည့်တိုက်မှူး Birgitta Ingebrand,
ယာဉ်မောင်း / စာကြည့်တိုက်ဇန်နဝါရီÅkerström.